Musharraxiin Dhisaya Dallad Mideysa Si Isbadel Maamul Uga Dhaco Puntland * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Nairobi, November 7, 2013: Qaar ka mid ah musharraxiinta u taagan xilka madaxweyaha Puntland ee lagu wado in la qabo bisha ugu hooreysa sanadka cusub ee 2014 ayaa shir ay ku yeesheen magaalada Nairobi waxey ilaa 6 qodob oo ay ka mid tahay iney sameystaan dallad mideysan si isbadel xagga maamulka ah uga dhaco Puntland.
28-kii bishoo Oktoobar, 2013 ayaa 8 ka mid ah musharraxiinta xilka madaxweynaha Puntaland waxey soo saareen bayaan ay shaki ku geliyeen in doorashada Puntland noqon karto mid cadaalad ah, waxeyna codsadeen kormeeyalaa caalami ah.
Halkaan ka aqri warka kazoo baxay 5 ka mid ah musharrixiinta u doonaya kursiga madaxtinimada maamulka Puntland.
Annaga oo ah xubno ka mid ah murashaxiinta u tartamaya hoggaanka sare ee Puntland, ayaa taariikhdu marker ahyed 6/ 11/ 2013, waxaan kulan hor-dhac ah ku yeelaney magaalada Nairobi (Kenya).
Waxaan kuqaadaa-dhigney duruufaha adag ee ku xeeran doorashada madaxweynaha dowladda Puntland ee dhicidoonta 8/ 1/2014, iyo habsami u socodka looga baahan yahay.
Labadaas arimood oo ah kuwo aanan isu dheelli-tirneyn ayaau muuqatey dhamaan murashaxiintayada kulantey.
Sidaa darteed waxaanu isla-garanay in ay lagama maarmaantahay in la helo qaab doorasho oo ku dhisan wadatashi dhammaan inta ay khuseyso sida Issimadda, Dowladda, musharixiinta, Iyo bulshada rayidka ah, taas oo suurta-gelin karta doorasho hufan oo caddaalad ku dhisan.
Dooddheer iyo falanqeyn badan dabadeed, waxaanu isla-gaarney qodobadan hoos ku xusan:
1. Murashaxiintu markii ay dhamaantood gudihii dalka tagaan, in ay dhistaan dallad mideysa si iyaga oo wadajir ah ay u raadiyaan doorasho hufan oo is-beddel keenta.
2. Waxaan taageero buuxda siineynaa bayaankii Gaalkacyo ee ku taariikheysnaa 29/ 10/ 2013, kaas oo ay soo saareen qaar kamid ah murashaxiinta Puntland.
Qodobadiisii lixda ahaa ayaanu u aragnaa in ay saldhig u yihiin doorasho hufan oo dad-weynaha Puntland ay ku kalsoonaan karaan.
3. Issimada Puntland waxaanu ugu baaqeynaa in ay gutaan xilka taariikhiga ah ee ka saaran wadajirka iyo nabadgelyada Puntland.
Sidaas awgeed, murashaxiinta bayaankan saxiixay, waxay ku baaqayaaan qabsoomidda shirkii Isimmada ee uu gogoshiisa dhigay Qardho ku-simaha Boqorka, welina aan la laabin, si ay u turxaanbixiyaan mad-madowga soo kala dhex-galey beelaha walaalaha ah ee wada dhistay dowladda Puntland (1998).
4. Waxaan u mahad-celineynaa beesha caalamka dadaalka ay la garab-taagan tahay in doorashada Puntland ay u dhacdo si hufan, loona sii adkayn lahaa nabadgelyada Puntland, gaar ahaan caasimada Garoowe.
Murashaxiinta bayaankan saxiixay, waxay ka codsanayaan Bulshada caalamka inay sii xoojiyaan la socoshada, ayna goob-jooge ka noqdaan hannaanka doorashada, si doorashadu ay u noqoto mid loo dhan yahay loona siman yahay.
5. Murashaxiinta bayaankan saxiixay, waxay soo jeedinayaan in doorashadu ku dhacdo wakhtigeeda oo ah 8/01/2014. Isla markaasna u dhacdo si nabad ah.
6. Qeybaha bulshada Puntland ee kala duwan, dhamaantood waxaanu ugu baaqeynaa in ay adkeeyaan nabadgelyada. Islamarkaas ay ka shaqeeyaan sidii doorashadu ay inoogu dhici lahayd qaab hufan, wanaag iyo hiraalna ku kordhisa aayaha wanaagsan ee shacabkayagu uu tiigsanayo.
Murashaxiinta bayaankan soo saarey waa:
1. Xaaji Maxamad Yaasiin Ismaaciil
2. Mr. Maxamad Cabdi-Nuur Xirsi
3. Prof. Cabdi-weli Maxamad Cali-Gaas
4. Dr. Cali Xaaji Warsame
5. Dr. Saadiq Maxamad (Enow)
National Health Conference encouraging Somali health professionals may help transform Somalia’s health service”